Fanamafisana ny fahadiovana avy amin'ireo valan-javaboary ho an'ny fiara fitateram-bahoaka any Başkent | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Fanamafisana ny fahadiovana avy amin'ireo valan-javaboary ho an'ny fiara fitateram-bahoaka any Başkent
12 / 03 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, PHOTOS, ANKAPOBENY, Highway, KENTİÇİ Rail Systems, Tire Wheel Systems, Headline, Metro, TORKIA
fanentanana fahadiovana avy amin'ny zaridainan'ny fiara fitateram-bahoaka any an-drenivohitra
Any an-drenivohitra, ny kaominina Metropolitan dia manohy miady amin'ny valanaretina pesta. Ny asa fanadiovana sy fitrandrahana dia tanterahina amina teboka maro manomboka amin'ny rafitry ny lalamby mankany bus, manomboka amin'ny AŞTİ ka hatrany amin'ny serivisy serivisy Metropolitan, avy amin'ny faritra fialam-boly mankany amin'ny tranoben'ny fikambanana tsy miankina. Raha ny asan'ny disemplikan dia nitombo avo roa heny niaraka tamin'ny latabatra krizy napetraky ny ben'ny tanàna Mayor Mansur Yavaş Ankara Metropolitan, ny fomba rivotra maina (fomba pulvarization) dia natomboka ampiasaina indrindra hanesorana ny bakteria sy viriosy amin'ny ANKARAY, Metro, Cable Car ary Buses.
Ny munisipaly Ankara Metropolitan dia nampitombo ny lanjany amin'ny fiadiana amin'ny areti-mifindra.
Miaraka amin'ny baikon'ny valanaretina, izay mahomby eran'izao tontolo izao, amin'ny alàlan'ny torolalana nataon'ny Ben'ny tanànan'i Metropolitan Mansur Yavaş, ny fandinihana ny fanavanana sy ny fanalefahana ny olom-pirenena, indrindra ny fiara fitateram-bahoaka.
Ny Kaominin'i Metropolitan dia namorona ny biraon'ny krizy ao anatin'ny faritra misy ny ady amin'ny areti-mifindra ary efa mailo miaraka amin'ireo antokony rehetra.
MANOLOTY ARY HANOKO NY KARANA
Tanànan'ny Metropolitan, manerana ny tanàna miaraka amin'ny fomba fanao mialoha ny fahasalamam-bahoaka;
- Rafitra momba ny lalamby (ANKARAY, Metro, fiara fitaterana)
-Ego sy fiara fitateram-bahoaka tsy miankina sy minibus
- Fanamboarana serivisy Metropolitan,
Hijery ao amin'ny distrika
-To trano velona
- Ao amin'ny teboka fivarotana mofo
Mbola mitohy miaraka amin'ny ekipan'ny fanadiovana 7/24.
FITAOVANA VAOVAO IZAO DIA MAMPITAOKANA
Ny kaominin'ny Metropolitan dia nanomboka nampiasa fomba vaovao tamin'ny fanadihadiana disinpikanika izay natao tany amin'ny faritra, anisan'izany ireo foibe sy distrika.
Ny filazan'izy ireo fa mampiasa ireo vokatra tsy disfektika nankatoavin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fahasalamana sy ny Ministeran'ny Fahasalamana, izay tsy manohintohina ny fahasalamam-bahoaka, dia hoy i Seyfettin Aslan, Lehiben'ny departemantan'ny fahasalamana fa nanomboka nampiasa fomba vaovao izy ireo amin'ny ady amin'ny bakteria sy otrikaretina, indrindra amin'ireo rafi-piara sy bus.
“Nampitomboinay ny ezaka fanadiovana sy fanadiovana ny ady amin'ny otrikaretina amin'ny alàlan'ny baikon'ny filoham-pirenena Andriamatoa Mansur Yavas. Ankehitriny dia mandray fepetra vaovao izahay amin'ny fomba fijery vaovao. Izahay dia nanomboka nampiasa rafitra vaovao, novaina, izany hoe fomba rivotra maina. Izahay dia manome antoka fa ny fiara metro sy ny bus dia rakotra setroka toy ny sarimihetsika amin'ny sarimihetsika. Izahay dia mandrefy ny haben'ny virus amin'ny alàlan'ny fanaovana fandrefesana hanesorana ny bakteria sy ny virus. Tena hitanay fa mandaitra ity fomba ity. Amin'izany fomba izany, dia hataonay antoka kokoa ny sarety sy bus rehetra. Hanohy an'ity dingana ity isika amin'ny elanelan'ny elanelana. ”
HYGIENE FRONT PLAN IN FOLK BREAD
Raha toa ny sangan'asan'ny fahadiovana sy ny vokatra ateraky ny tanàn-dehibe dia tanterahina am-pahamendrehana, hoy ny mpiasan'ny Halk Bread ary ny injeniera Murat Şanlı fa nanafaingana ny asa fanadiovana izy ireo tany amin'ny faritra fivarotana orinasa sy faritra famokarana.
Nanambara izy fa nanao ny fampitandremana ilaina ho an'ny fahasalaman'ny olom-pirenena sy ny olom-pirenena izy, hoy i Şanlı, "Vao haingana izahay dia nampitombo ny fepetra sy ny fifehezana teo amin'ny sehatry ny famokarana orinasa sy ny toerana fivarotana noho ny mety hisian'ny areti-mifindra. Amin'ity sehatra ity, tsy ekenay ny fangatahana fitsidihana any amin'ny orinasa anay. Ny fanadiovana amin'ny ankapobeny dia atao tsy tapaka, fa indrindra ny crères mofo dia disimpirina amin'ny milina mpanamboatra manokana. Nanomboka nampiasa otrikaretina tanana izahay ho an'ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny olom-pirenentsika. Nametraka ny fampitandremana fampitandremana izahay. Miaraka amin'ny faritra fihinanana, voadio miaraka amin'ny vahaolana manokana ny latabatra ataontsika. Ny entanay no tena ilaina sy salama satria masaka amin'ny hafanana avo izy ireo. Ny mofonay avy amin'ny famokarana mankany amin'ny fandefasana dia omen'ny mpiasan'ny mpiasa rehetra ao aminay amin'ny fanaovana fonon-tanana, taolana ary firakotra kiraro ”.
FIVAROTANA AZY ATAO AMIN NY FIAINANA FIAINAKO FIANAKAVIANA DIDIKA
Ny asa fanadiovana dia tanterahana amin'ny alàlan'ny vokatra afovoan'ny otrikaretina midorehitra tsy ao anaty afovoan-tanàna ihany fa any amin'ny vondrona monisipaly metropolitanina.
Ireo efitrano fanatanjahantena, efitrano fianarana, efitrano fidiovana, lakozia ary toeram-ponenana mahazatra ao amin'ny Ivom-piainan'ny Fianakaviana, indrindra ao amin'ny Direction Operation Regional Polatlı ASKİ.
Ny sampandraharaha miaro ny tontolo iainana sy ny fanaraha-maso, ny ekipan'ny departemantan'ny fahasalamana sy ny ekipa BELPLAS dia nanamafy ny fandinihana ny disin-drariny izay natao tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Chambre Medical Ankara.
Ny ekipan'ny Kaotikan'ny Metropolitan dia manatanteraka asa disinfikanina any an-tsekoly, toeram-pivarotana lehibe, moske, foiben'ny antoko politika ary tranobe tsy an'ny governemanta any Ankara, misy fiara 60 sy mpiasa 205.
Fanentanana fahadiovana amin'ny fiara fitateram-bahoaka any Kocaeli
Fanamafisana ny fahadiovana amin'ny fitateram-bahoaka any Erzurum
Fianarana momba ny fahadiovana ao amin'ny fiara fitateram-bahoaka Elazig
Fanentanana momba ny fahadiovana manohitra ny Coronavirus dia nanomboka tao Gaziantep
Ny fitateram-bahoaka ao Istanbul dia mandefa mpandeha isan'andro 2.5 tapitrisa
Fiara fitateram-bahoaka ao Trabzon 1 13 dia nitondra mpandeha an-tapitrisany taona
Androany amin'ny tantara: 12 Martsa 1911 Railway Bagdad